भारतबाट फर्कीए प्रधानमन्त्री, विमानस्थलमा के भने प्रधानमन्त्रीले ? | mulkhabar.com
भारतबाट फर्कीए प्रधानमन्त्री, विमानस्थलमा के भने प्रधानमन्त्रीले ?
April 9, 2018 | 7:15 am 172 Hits
भारतको ३ दिने औपचारीक भ्रमण सकाएर प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली आइतबार साँझ स्वदेश पर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोली आइतवार साँझ त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रीहरु, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले स्वागत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार विहान ९ बजे विदा भएर आइतबार फर्किएका हुन् ।
विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण यथार्थमै सफल र उपलव्धीमूलक भएको बताए ।
उनले आफ्नो भ्रमणको अपेक्षीत उपलव्धी हाँसील भएको दावी गर्दै अब भारतसँग सम्वन्ध नविग्रने बताए । उनले भ्रमण कति सफल भयो भन्ने कुरा तस्वीरले नै देखाएको भन्दै आफूले भनिरहनुनपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रेलवे, जलमार्ग र कृषिको आधुनिकीकरणसम्बन्धी सम्झौताले भारत भ्रमण यथार्थमै उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् । तीन दिने भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भारतले निर्वाचनमार्फत प्राप्त अभिमतलाई स्वीकार्दै तीन महत्वपूर्ण सम्झौतामार्फत नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउन चाहेको स्पष्ट पारे ।
के भने विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री ओलीले ?
त्रिभुवन विमानस्थलबाट पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली LIVE
Posted by Naya Patrika on Sunday, April 8, 2018
पुराना विषय– सिमा विवाद, डुवान आदी कुराहरुको सम्बन्धमा गम्भीरताका साथ कुरा उठाएका छौं । सकेसम्म कसरी छिटो डुवानको समस्या समाधान गर्न सक्छौं भन्ने कुरा आएको छ । पञ्चेश्वर परियोजनाका सन्दर्भमा टनकपुरमा १ दशमलब ३ किमी नहर नबनेको कुराले परेको नकारात्मक असरका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौं । उहाँहरुले छिट्टै काम अघि बढाउने भनेर म दिल्लीमा छँदै तल निर्देशन जारी गर्नुभएछ ।
आईतबार उत्तराखण्ड जाँदा कतिपय कुरा उत्तराखण्ड सरकारलाई केन्द्रबाट निर्देशन आइसकेको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । कतिओटा कुरा हामीले उठायौं भन्नका लागि होइन, हामी समस्या सम्बादका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहान्छौ । सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरुमा जहाँ छलफल र निष्कर्ष आवश्यक छ, ती सन्दर्भहरुमा हामीले कुरा गरेका छौं ।
क्रश बोर्डर क्राइम, ह्युमन ट्राफिकिङका कुरा भएको छ । म आश्वस्त पार्छु, तमाम कुरा उठेका छन्, सकारात्मक कुरा भएको छ । जुन कुराहरु लिखित रुपमा आएको छ, त्यसलाई त्यसैगरी अघि बढाएका छौं । जुन कुरा लिखित आउन बाँकी छ, त्यसलाई उछाल्ने होइन समाधान खोज्ने दिशामा गम्भीर वार्तामा लागेका छौं । अबको बाटो गम्भीर वार्ताको हो ।
कसैले बिगारे बेग्लै कुरा नत्र तस्वीर आफैं बोल्छ – नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो छ ? एउटा भन्ने चलन छ नि, तस्वीर आफैं बोल्छ । के तस्वीर आफैँ बोलेको छैन र ? त्यसकारण अब धेरै भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । बिगारेन भने सँधैका लागि राम्रो हुँदै जान्छ । कसैले बिगारे बेग्लै कुरा तर हामी बिर्गादैनौं, हामी सकारात्मक ढंगले अघि बढाउँछौं । त्यसकारण पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमै सम्बन्ध अघि बढ्नुपर्छ र बढ्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने, उर्जा व्यापारका लागि इनर्जी बैंक स्थापना गर्नेलगायतका विषयमा पनि कुराकानी भएको जानकारी दिए । उर्जा व्यापार सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन विस्तृत प्रतिवेदन प्राथमिकताका साथ अनुमोदन गर्ने, महाकाली सन्धीअनुसार नेपालले पाउने सिंचाई सुविधाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न थप पहल गर्ने विषयमा कुराकानी भएको उनले बताए ।
त्यस्तै, भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि भारतको सहुलीयत ऋणका लागि थप पहल गर्ने, व्यापार घाटा क मगर्न द्धिपक्षीय छलफल गर्दै जाने । १९९६ को व्यापार सन्धीको प्रावधान प्रष्ट पार्दै व्यापार घाटा दीर्घकालीन सम्झौता छलफल गर्ने । थप हवाई प्रवेशद्धार उपलब्ध गराउने , नेपाली ग्यास बुलेट संचालनका लागि सहजिकरण गर्नेलगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।